Ilay Tany Nampanantenaina: ROI Marketing mahomby sy maharitra eo alohan'izay | Martech Zone
Tongasoa eto amin'izay iantsoan'ny teknolojia marketing Ny vanim-potoanan'ny mpanjifa.
Amin'ny 2016, 89% amin'ireo orinasa no manantena ny hifaninana amin'ny fototry ny traikefan'ny mpanjifa, vs 36% efa-taona lasa izay. Loharano: Gartner
Raha mbola mivoatra hatrany ny fitondran-tena sy ny haitao, dia tokony hifanaraka amin'ny dian'ny mpanjifa ny paikadim-barotrao. Ny atiny mahomby ankehitriny dia tarihin'ny traikefa - oviana, aiza ary amin'ny fomba ahoana no itadiavan'ny mpanjifa azy. Ny traikefa tsara amin'ny fantsom-barotra rehetra no lakilen'ny tokana lehibe indrindra amin'ity fivoarana ity.
Widen dia nandinika an'io tranga io tamin'ny sary vao haingana, Fitaovana ny varotra atiny ho an'ny sahan'ady vaovao: traikefan'ny mpanjifa. Izy io dia fomba fijery feno momba ny fiantraikan'ny marketing amin'ny atiny amin'ny traikefan'ny mpanjifa, manome torohevitra momba ny fiatraikany tsara amin'ny marika.
Ny singa manana traikefa ho an'ny mpanjifa mandresy dia azo fehezina amin'ny fahatsapana telo:
Fantaro ny mpanjifa - Ekeo ny mpanjifa, ny tantarany ary ny safidiny.
Mifandraisa amin'ny mpanjifa - Tsindrio ny fihetsem-po, asehoy ny zavatra tiany, ary aza mandany fotoana amin'ny zavatra tsy tadiaviny.
Aza avela mihantona ny mpanjifa - Omeo ny valiny ara-potoana sy mifanaraka amin'ny fotoana sy ny toerana tadiavin'ny mpanjifa.
ROI marketing azo antoka sy maharitra dia azo tratrarina. Araho ireo dingana ireo ary hiditra ny Tany Nampanantenaina ny orinasanao.
Tags: fitantanana votoatyContent Marketingfitadiavana mpanjifafitantanana fananana nomerikaSary torohayhihamalalaka
Lehiben'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny IUPUI aho izay mifantoka amin'ny Fifandraisam-bahoaka ary zaza tsy ampy taona amin'ny fitantanana hetsika. Mahazo tsiro ny tontolon'ny varotra amin'ny maha-mpikatroka maharitra maharitra ahy ato aho DK New Media. Mpianatra, zanaka vavy, anabavy, namana, ary renim-pianakaviana miavonavona.